Abavelisi begrafiki etyebisayo, igrafiki ye-clay idrafti, i-Silicon carbide igrafiki ye-gracarmed - i-ttlceramic
Ikhaya > Iimveliso > Igrafu esithe tyaba
Igrafu ye-greyitives zizikhombu zesona sibopheleleko senziwa ngokukodwa kwimisebenzi yentsimbi. Ezi zenziwa ngomxube wegraphiriya, udongwe olukhawulezileyo, i-grog kunye nezinye izongeziweyo. ... I-Crubibles iyafumaneka okanye ngaphandle kwe-spout. Ezi zinto zibethelayo zisetyenziselwa ukunyibilikisa izinyithi ezinobuchule, ezingengongabi sezintsimbi ezingenantlonelo kunye nezinyithi.
Igrafu esithe tye sisitya esisetyenziselwa ukunyibilika size siphosa izinyithi ezingezizo ezinzima, ezingezizo zesilivere ezinjengegolide, isilivere, i-aluminium, kunye nobhedu. Esona sizathu siphambili semifanekiso edumileyo sithandwa njengesixhobo sokwenza ubushushu, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukwandiswa kwamaqondo obushushu amancinci, ulwandiso oluncinci lwe-thermal, kunye neepropathi zabo zokufudumeza kokufudumeza nokupholisa. Ziyotyhefu ukunganyangeki kwii-Acids kunye nezisombululo zeAlkaline kwaye uwazinzo kwimichiza.
Igrafu inokuveliswa kwigrafu yendalo eyindlela ye-crystalline yendalo yecarbon. Le ndlela yegrafu yenziwa ngokudibanisa igrafu kunye nodongwe olunganyangekiyo lomlilo okanye ikharbon diokside.
Igrafu ye-Synthetic iveliswa ngokwenza i-Petroleum Petch kunye nePetroleum Coke, i-butprolects yenkqubo yokucoca ioyile. Inomxholo ophezulu wecarblon osisigxina onesiphumo esincinci kakhulu kunye nomxholo ophantsi wesalfure.
Umgangatho wegrafu enqabileyo umiselwa ngendlela yenziwa ngayo, ephembelela isakhiwo sayo, ukuxinana, ukuthambisa kunye namandla.
Zintathu iindlela zokwenza ubumo, eziphelileyo, ivibfialling, kunye ne-isostitcal.